Vaovao - Miantso ny governemanta ny lehiben'ny Antenimieran'ny Varotra ao Waikato mba tsy hiseho amin'ilay tetikasa voaomana angady
Ny lehiben'ny Antenimieran'ny Varotra ao Waikato dia manao antso avo amin'ny governemanta mba tsy hiseho amin'ilay tetikasa voaomana angady
Don Good, talen'ny fanatanterahana ny Antenimieran'ny Varotra ao Waikato, dia nitsikera ny governemanta satria tsy manana tetikasa izay azo angady avy hatrany any Waikato ny firenena, raha miandry ny fanekena ireo tetikasa ireo ny mpiantoka sivily.
Tsy nanambara ny ankamaroan'ny tetikasa fanomanana angady eto an-tany ny governemanta. Na izany aza, nanolotra tetik'asa 23 tamin'ny governemanta foibe ny filan-kevitry ny tanànan'i Waikato tamin'ny volana aprily, mitentina 2,8 miliara dolara amerikana.
150 tapitrisa dolara eo ho eo no natokana ho an'i Waikato, izay misy tetik'asa vonona angady toy ny fanavaozana ny zaridaina Hamilton sy fotodrafitrasa bisikileta manerana ny tanàna.
Tao amin'ny taratasy iray ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Chamber of Commerce, nilaza i Goode fa manemotra ny fanambaràna ireo tetikasa ireo ny governemanta ary very lalana amin'ny birao hanitarana ny tetikasa fanitarana Cambridge ka hatrany Piarrell mankany amin'ny Waikato Expressway sy South Link.
“Inona no ataon'ny governemanta amin'ny Filan-kevitry ny tanànan'i Hamilton, ny Distrikan'ny distrikan'i Waipa ary ireo tetik'asa fanomanana lehibe hafa natolotry ny Filan-kevitry ny Distrikan'i Waikato dimy volana lasa izay?
"Tsy mampino fa teny filamatra teolojika tsotra fotsiny izy ireo tamin'izany fotoana izany, nanolotra fotoana ho an'ireo birao Wellington tena lafo vidy hamoaka tatitra eo am-baravarana, izay manangona vovoka amin'ny talantanan'ny masoivohon'ny governemanta ankehitriny."
“Fantatsika ny fahafoizan-tena takiana amin'ny fandraisana ny Covid-19. Anisan'ny ekipa misy 5 tapitrisa izahay ary nanao sorona. Fa ny dimy volana hamolavolana drafitra hanampiana ny toe-karena hody dia lava loatra.
“Ny fomba fanomanana angady dia tsotra. Voahidy ao anaty isika, ary ny mpibaiko antsika dia mila mampiasa vola amin'ny tetik'asa manome fotodrafitrasa maro-taranaka, izay mitondra asa ho an'ny olona maro.
“Hanome toky ny olona izany. Ny vola dia hanosika ny vola hiditra amin'ny toekarena, ary ny vola eo am-pelatanana dia hanome fiarovana ny olona. Amin'ny fahatokiana sy filaminana, afaka manome toky ny olona ianao.
“Faly izahay fa voaporofo fa diso izahay. Faly izahay fa maheno fanambarana manandanja iray rahampitso fa nekena ny vola ho an'ny tetikasa lehibe sasany. Te hiasa ny orinasa. ”
"Ny faritra Waikato dia niantso ny fahatokisan-tena amin'ny ho avy ka afaka mihemotra isika amin'ny taona 2020. Miangavy ny mpitondra anay izahay ankehitriny: Aza avela hilatsaka izahay."
Na dia manjombona aza ny vinan'i Good, ny valin'ny fanadihadiana tamin'ny indostrian'ny fanorenana tamin'ny taona 2020 dia nampiseho fa miaraka amin'ny “Fifanarahana momba ny fananganana”, ny Sanshui Reform sy ny Vaomiera momba ny fotodrafitrasa New Zealand dia nanomboka nisy fiatraikany amin'ny làlan'ny asa, ary ny indostria mahita mamiratra ho avy.
Ny mpandraharaha sivily marefo dia mandray fepetra maromaro hiatrehana ny fanamby atrehin'izy ireo mandritra ny fotoana fohy amin'ny fikorianam-bola, ny tsy fahazoana antoka amin'ny fizotran'ny asa, ary ny fifanarahana nofoanana / lava.
Satria ny governemanta eo an-toerana sy afovoany dia mitaky ny 75% ho an'ny mpanjifan'ny indostrian'ny fanorenana, antenaina fa hisy fiatraikany tsara ny drafitra fanavaozana ny governemanta any Nouvelle-Zélande farany teo, 69% amin'izy ireo no manantena ny hisy fiatraikany tsara ao anatin'ny telo taona, ary ny fampandrenesana vonona momba ny fotodrafitrasa dia hanana fanampiana Helps fihenan'ny fandaniam-bolan'ny governemanta eo an-toerana noho ny fiantraikan'ny Covid-19 amin'ny tetibola.
Peter Silcock, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny New Zealand Contractors, dia nanao hoe: "Na eo aza ny toe-karena sarotra, maro ireo mpandraharaha no matoky ny fahaizany miova ary manantena ny hitazona sy hihazona ireo mpiasan'izy ireo amin'ny toe-javatra sasany."
"Ny mpandraharaha dia mila mandray fepetra hiantohana ny fiasan'ny orinasany amin'ny fihenan'ny fotoana fohy ny asa ao anatin'ny volana vitsivitsy, mialoha ny tetikasa kasaina hatao mandritra ny dimy taona ho avy."